Sida looga hadlo Ciyaaraha / スポーツについて話す方法 – 対話 | OpenTran
Sida looga hadlo Ciyaaraha / スポーツについて話す方法 – 対話
無料のオンライン翻訳者と辞書 ソマリア語日本語翻訳 Sida looga hadlo Ciyaaraha / スポーツについて話す方法 – 対話
Raj: waad salaaman tihiin dhamaantiin, iska warran?
Akhil: Waan fiicanahay, sidee wax waliba u socdaan?
Sunny: Waxyaabaha si fiican ayey ku socdaan dhamaadka. Labadiin ka waran
Raj: Maalmahan hoostooda waan ku barafoobay aniga iyo shaqadaydii iyo qoyskaygii. Waqti uma haysto nooc kasta oo isboorti iyo waxqabadyo firaaqo ah. Idinka bal ka warrama? Labadiinaba ma tihiin nooc kasta oo Sport ah?
Akhil: Ciyaaraha aan ugu jeclahay waa Cricket. Aniga iyo asxaabteydu sida caadiga ah waxaan ku ciyaarnaa galab walba oo Axad ah Xarunta Ciyaaraha waxaanan aaminsanahay inaan qarax leenahay.
Sunny: Aniguba qayb ma ka noqon karaa qaraxaas Axadda soo socota?
Akhil: labadiinaba waad nagu soo biiri kartaan markasta.
Raj: Waan ku soo biiri karaa usbuuca soo socda. Rajaynaynaa in taasi caadi tahay?
Akhil: Dabcan, wax dhib ah malahan taas. Waxaan lahaan laheyn baashaal dhab ah.
Sunny: By the way, Ma daawaneysaa tartamada Cricket-ka Hindiya? Runtii maalmahan waxay noqdeen kuwa xiiso badan.
Raj: Haa waa hubaal. Ka dib markii Kohli uu noqday kabtanka, kulamada ayaa kor u kacay.
Akhil: Waxaan u maleynayaa in MS Dhoni uu kabtan ka fiicnaa Virat Kohli. Waxaan dareemayaa inaanan iska indha tiri karin dadaalka Dhoni kabtan ahaan, wuxuu ku guuleystay 2007 Twenty20 sidoo kale wuxuu ku guuleystay Koobka Adduunka 2011. Akhil:
Sunny: Xitaa waan kugu raacsanahay. Waxqabadka Dhoni wuxuu ahaa mid isdaba-joog ah tan iyo bilowgii waxaanan hubaa inuu sameyn doono sida ugu fiican mustaqbalka sidoo kale. Waxaan u maleynayaa Virat inuu yahay kabtanka ugu da'da yar taariikhda Cricket-ka illaa iyo hadda. Wuxuu ku guuleystay Man of Tournament labo jeer ICC World Twenty20. Waxqabadka Kohli runti wuxuu ahaa mid xasaasi ah illaa iyo hadda.
サニー：私もあなたに同意します。ドーニのパフォーマンスは最初から非常に一貫しており、彼は将来も最善を尽くすと確信しています。 Viratはこれまでのクリケット史上最年少のキャプテンだと思います。彼はICCWorldTwenty20でManof theTournamentを2回獲得しました。コーリのパフォーマンスはこれまで本当に素晴らしいものでした。
Raj: Ka waran ciyaartoy kale? Waa sidee waxqabadkoodu?
Sunny: Ravindra Jadeja iyo Suresh Raina waa laba ciyaartooy oo kale kuwaas oo qaab ciyaareedkooda si weyn kor ugu kacay.
Akhil: Haa, sidoo kale waxay u ciyaaraan si fantastik ah. By the way, waxaan qaadan lahaa fasaxaaga sida ay tahay inaan tago. Aan ku kulanno Axadda soo socota Dhismaha.
Sunny: Waxaan jeclaan lahaa inaan qeyb ka noqdo. Hubaal waan iman doonaa.
Raj: Inyar baan kugu wargalin lahaa. Sikastaba waxay ahayd kulan fiican oo aan kula kulanay.
Sida looga hadlo Ciyaaraha スポーツについて話す方法
Indha-indheynta Magaalada 町の観光
At Timo-jaraha ' 美容院で
Raadinta guri dabaq ah アパートを探しています
Maalinteyda Shaqada 私の就業日